Barcelona oo war rasmi ah ka soo saartay heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca maanta soo gaaray Ivan Rakitić – Gool FM
(Barcelona) 12 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa maanta oo Talaado ah shaaca kaga qaaday website-keeda heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca soo gaaray Ivan Rakitić.
Ivan Rakitić.ayaa maanta ka dhaqaaqay xerada tababarka ee xulka qaranka Croatia, wuxuuna dib ugu soo laabtay magaalada Barcelona si uu u helo daaweyn, wuxuuna seegi doonaa kulanka Slovakia ee isreeb-reebka koobka Euro 2020.
Hadaba warbixin ay ku shaacisay kooxda Barcelona website-keeda rasmiga ah iyo dhamaan boggaga ay ku leedahay baraha bulshada ayaa waxay ku sheegtay in Rakitić uu dhaawac ka soo gaaray dhanka canqowga ah.
Warbixinta ayaa waxay intaas ku sii dartay in Ivan Rakitić uu isaga dhaqaaqay xerada tababarka ee xulka qaranka Croatia isla markaana uu dib ugu laabtay magaalada Barcelona.
Warka ayaa la sii raaciyay in Ivan Rakitić uu sidoo kale seegi doono kulanka saaxiibtinimo ay barri wada ciyaari doonaan kooxaha Cartagena iyo Barcelona, waxayna dib ugu soo laabashadiisa garoomada ay ku xirnaan doonto jawaabta ka soo baxda daaweyntiisa.
Cristiano Ronaldo oo la bar-bardhigay Ballon d'Or abaal-marinta Nobel Prize